हितोपदेश 23 ERV-NE - —6— - यदि तिमी - Bible Gateway
23 यदि तिमी कुनै अधिकृतसित भोजनमा बसेको छौ भने याद राख तिमी कसको अघि छौ।2तिमी धेरै खाने गर्थ्यौ भने पनि तिमीले आफूलाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ।3उसको स्वादिलो भोजनद्वारा परिक्षीत नहोऊ किनभने उसको भोजन छलपूर्ण हुन्छ।[a]
4 धनी बन्न चेष्टा गर्दै आफैंलाई नथकाऊ। यदि तिमी बुद्धिमानी छौ भने तिमीले यस्तो गर्न बन्द गर।5धन-सम्पत्ति हेर्दा-हेर्दा शेष भएर जान्छ। धन सम्पत्ति आफ्नो पखेंटा फैलाएर उडेर जाने चरा झैं आकाशमा जान्छ।
6 एउटा कन्जूस मानिस सित भोजन नखाऊ। उसको घरमा पकाएको स्वादिलो भोजनको इच्छा नगर।7त्यो यस्तो मानिस हो जो आफ्नो भोजनको मोल लगाई रहन्छ। तिमीलाई त भन्छ, “तिमी खाऊ, मस्त भई खाऊ,” तर त्यो उसको मनभित्रबाट भनेको होइन। 8 तिमीले अलिकति खाएको पनि उकेलि दिने छौ अनि तिमीले उसलाई गरेका प्रशंसाहरू व्यर्थ भएर जान्छन्।
9 मूर्खले तिम्रा ज्ञानी वचनहरूलाई घृणा गर्छ, मूर्खसित कुरा नगर।
10 जमीनमा पुरानो सिमाना भए त्यसलाई सार्ने प्रयास नगर। टुहुरा-टुहुरीहरूको जमीन जबरजस्ती दखल नगर। 11 किनभने परमप्रभु ती अनाथहरूको शक्तिशाली संरक्षक हुनु हुन्छ जसले अनाथहरूको पक्षमा तिमीसित अदालतमा लड्नु हुन्छ।
12 तिमीहरूको विचारलाई अनुशासनमा लगाऊ अनि ज्ञानको शिक्षाहरूमा ध्यान देऊ।
13 आवश्यकता अनुसार नानीलाई सधैँ सजाय देऊ। सजाय दिदाँ त्यो मर्दैन। 14 यदि तिमीले उसलाई सजाय दियौ भने, तिमीले उसलाई चिहानबाट रक्षा गर्ने छौ।
15 हे मेरो छोरो, तिमी बुद्धिमान् भयौ भने म खुशी हुनेछु। 16 यदि तिमीले सही कुराहरू गरेको सुन्न पाए म हृदयबाट नै खुशी हुने थिँए।
17 पापीहरूको ईर्ष्या नगर। तर सबै समयमा, परमप्रभुलाई सम्मान गर। 18 तब तिम्रो एउटा भविष्य हुन्छ, तिम्रो आशा कहिल्यै हराउने छैन।
19 मेरो छोरो, सुन र ज्ञानी बन! सधैँ सही बाटोमा हिँड्ने कुरा ख्याल गर। 20 धेरै भोजन गर्ने तथा दाखरस पिउँने मानिस सित मित्रता नराख। 21 जुन मानिसले धेरै खान्छ अनि धेरै पिउँछ भने गरीब हुन्छ। उसको उडाइले उसलाई थोत्रो लुगा लगाउने बनाई दिन्छ।
22 तिम्रा बाबु जसले तिमीलाई जीवन दिए उनको बचनहरू सुन। तिम्री आमा भनेर उनलाई हेला नगर। 23 सत्यतालाई किन अनि यसलाई नबेच। ज्ञान, अनुशासन अनि समझ शक्तिलाई पनि किन। 24 ईमान्दार मानिसका बाबु अति सुखी मानिस हुन्। यदि कुनै मानिसको बुद्धिमान नानी छ, भने त्यस नानीले घरमा खुशीयाली ल्याउँछ। 25 यसर्थ तिम्रा आमा-बाबु तिमी सित खुशी भई बसुन्। तिम्री आमाले आनन्द पाउन।
26 हे मेरो छोरो! म जे भन्दैछु ध्यान दिएर सुन। मैले भनेका कुराहरू स्वीकार गर। 27 एउटी वेश्या एक गहिरो खाडल जस्तो हो एक व्यभिचारिणी स्त्री, एक साँधुरो इनार जस्तो हो। 28 एउटा खराब आइमाई डाँकुले झैं बाटो ढुकेर वस्छे अनि धेरै मानिसहरूलाई अविश्वासी बनाउँछे।
29-30 कसको दयनीयता छ? कसको दुःख छ? को कष्टमा डुबेकोछ? को झगडा़ टंटामा फँसेकोछ? बिना कारण कसले चोट पाएको छ? कसको आँखा राता भएका छन्? तिनीहरू ती हुन् जो रात दिन दाखमद्यको सेवनमा बिताउँछन् अनि जो मिश्रित मद्य चाख्न भोजनहरूमा जान्छन्।
31 दाखद्यद्वारा दाखको रातो रंगद्वारा यसको प्याला भित्रको चमकद्वारा मोहित नहोऊ। यो बिना अवरोध घाँटीबाट तल स्वाट्टै जान्छ। 32 तर अन्तमा यसले सर्पले झैं डस्छ गोप्य विष भएको विषालु सर्पले झैं डस्छ।
33 तिमीले विचित्र चीजहरू देख्ने छौ। भ्रान्त विचार, तिम्रो मनमा कुद्ने छन्। 34 तिमीलाई यस्तो लाग्नेछ महासमुद्रको माथिल्लो सतहमा सुतिरहेछौ, तिमी जहाज माथि सुतिरहेछौ। 35 तिमी भन्छौ तिनीहरूले मलाई हिर्काए मैले अनुभव गरिनँ, तिनीहरूले पिटे तर मलाई थाहा भएन। म कति वेला ब्यूँझन्छु? म जान्छु अनि अर्का मद्य पिउँछु।
23:3 उसको … छलपूर्ण हुन्छ यसको अर्थ यो हुन सक्छ कि घरवालाले पाहुनाबाट केहि पाउन चाह। न्छ। त्यसकरण उसले पाहुनालाई आँखा लोभ्याउने भोजन दिन्छ तर उसका उद्देशहरू साँच्चो हुँदैनन् तिनीहरू छलपूर्ण हुछन्।